China 42 Bi-Metal Hole yakaona yehuni simbi, Akaona sei, Gypsum Board Plastic Iron Plate Hole Saw, Metal Wood drill, matel drill fekitori uye vagadziri | Boda
42 Bi-Metal Hole yakaona yehuni simbi, Akaona sei, Gypsum Board Plastic Iron Plate Hole Saw, Metal Wood chibooreso, matel chibooreso
BOSENDA M42 Bi-Metal Hole Opener / BI-Metal Hole Saw inopfeka yakasimba kuramba mukushanda, iine banga rakapinza uye kubuda kwakatsetseka pamwe nekuita nyore. Panguva yekushanda kwacho, mazino akapinza uye diki vibration iyo inogona kunyatsoita chiyero kana ichichera maburi uye matanga mashandiro. Iyo nyowani dhizaini yechip kubvisa groove kunogona kuita kuti simbi yezvimedu ikurumidze kubviswa uye kuita kuti basa riite zvakanaka uye nyore. Izvo zvigadzirwa zvakagadzirirwa mushandisi-inoshamwaridzika.
BOSENDA Bi-Metal Hole Saws inotengeswa pasi rese, nevatengi vanobva kuUS, Canada, Australia, Germany, Britain, Spain uye Idya Nyika dzeEurope dzakadai seGeorgia, Russian, uye nenyika dzekuSouth America dzakaita seBrazil, Mexico, Chile , Colombia zvichingodaro, kuenda kuMiddle East nyika dzakaita seIraq, Dubai, Saudi, Qatar, Ameni zvichingodaro ....
BOSENDA masheya emaburi anonakidzwa nemhinduro yakanaka yemusika uye vatengi vanoisa iwo akajairwa maodha. Hunhu uye nekureba kwehupenyu hwemahanga macheki anogara achifadzwa nemataurirwo akanaka. BOSENDA mashaha emaburi anogona kuiswa kune ekushandisa maindasitiri, ayo anokwanisa kune ese nzvimbo yekuvaka.
Hole Saws ine yekugedza yepakati chibooreso, iyo yakamira zvakanyatsojeka, iine unopinza mhedzisiro, zvese izvi zvinogadzira mushandisi-hushamwari ruzivo uye kuponesa kwevashandi panguva yekushanda.
BOSENDA M42 Bi-Metal Hole Saws / Steel Hole Saws / Metal Drill ine saizi kubva pa14-300mm, M42 zvinhu, inokodzera kuvhura maburi pane simbi simbi, kukanda, aluminium alloy uye zvimwe simbi nenyere zvigadzirwa, plastiki ndiro, ese marudzi ehuni, gypsum board nezvimwe zvinhu.
Iyo yekunze inotonhorera mvura iri nani kuwedzerwa pairi painochera iyo simbi zvinhu. Kana paine chinomira chinokonzerwa nezvinhu zvemarara panguva yekushanda, zvinodikanwa kutanga kumisa mashandiro uye woenderera mberi nekushanda mushure mekurasa marara.
Usashandise simba rakawandisa kana uchibvarura uye kuunganidza screws. Kana uchichera maburi pane izvo zvinhu nehupamhi hunopfuura gumi mm, zvinodikanwa kuti ubvise chitubu pane chinzvimbo chekuboora.
Bi-Metal Hole Openers / Hole Saws / Bi-Metal Drills anoshandiswa zvakanyanya mumhando dzese dzebhenji chibooreso, muchina wekuchera uye wemagetsi ruoko chibooreso.
Saizi yechigadzirwa iri seinotevera:
Pashure: Kongiri gomba saha, yepakati chibooreso matomu, gomba saha, madziro gomba saha, kongiri chibooreso
Zvadaro: Diamond girazi zvedongo saha, girazi chibooreso, girazi holw saw, girazi tapper, zvedongo gomba saha, machena gomba saha
Concrete mugomba saha, chinoumba chibooreso matomu, mugomba saha, wal ...